❤️ IGTV Shopping ကို Instagram တွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ - Winches ကလပ်
Instagram သည် IGTV စျေး ၀ ယ်သည်ယခုတစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်ကြောင်းယခုလအစောပိုင်းတွင်ကြေငြာခဲ့သည်.
သတင်းအချက်အလတ်များအပြီးတွင်စျေး ၀ ယ်အင်္ဂါရပ်၏ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုသည်ထွက်ပေါ်လာသည်, ဇာတ်လမ်းနှင့်တိုက်ရိုက်ပို့စ်များကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်များစွာတို့ကအသုံးပြုခဲ့ကြသည်.
Instagram မှာဖော်ပြထားပါတယ် လစဉ် စျေးဝယ်ပို့စ်များကို ကြည့်ရှုသူ သန်း ၁၃၀ ခန့်ရှိသည်။.
ဤကိန်းဂဏန်းများကိုပေးအပ်သည်, ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည် အင်စတာဂရမ် IGTV ၏စျေး ၀ ယ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ပါ.
စတိုးဆိုင်၏မူလရည်ရွယ်ချက်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ကူညီရန်ဖြစ်သည်, Instagram မှ, အသုံးပြုသူများ၏ 60% သည် Instagram တွင် ထုတ်ကုန်အသစ်များကို စူးစမ်းရှာဖွေနေကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည်။.
သင်သည်သင်၏ Instagram စတိုးကိုမသတ်မှတ်ရသေးပါ, ငါတို့အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်. အရာများသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲနေသည်, နှင့်စတိုးဆိုင်အင်္ဂါရပ်သည် Insta စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်ကြီးမားသောထိခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်.
သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကိုပိုအဆင်ပြေပြီးအကျိုးရှိတဲ့နည်းနဲ့သူတို့ဆီရောက်အောင်ကူညီပေးခြင်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူများအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိခဲ့တယ်။.
Instagram ၏လျင်မြန်သောအပ်ဒိတ်များနှင့်ပြောင်းလဲမှုများသည်သုံးစွဲသူများအားဖမ်းစားနိုင်ရန်သေချာစေသည်. ပြီးတော့, သင်ဟာ၎င်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာပြီး IGTV စျေး ၀ ယ်ဖြင့်သင်၏ပရိသတ်ကိုဖမ်းယူပါ.
မင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အတွက် IGTV Shopping ကိုသုံးသင့်သလား?
IGTV စျေး ၀ ယ်သည်သူတို့၏ပရိသတ်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်သူတို့၏ပလက်ဖောင်းကိုသုံးသောသြဇာရှိသူများနှင့်ဖန်တီးသူများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်, အပိုငွေမစိုက်ရန်.
IGTV စျေး ၀ ယ်သည်သင်၏ဗွီဒီယိုများတွင်သင်ပြောသောကုန်ပစ္စည်းများကို tag တွဲခွင့်ပြုလိမ့်မည်, ဤဗီဒီယိုများတွင်တိုက်ရိုက်.
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုလူတစ်ယောက်ကို tag လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ဆင်တူပါတယ်။, ဒါပေမယ့်အစားကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို tag တွဲခြင်းဖြင့်.
ထုတ်ကုန်တံဆိပ်တပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, မင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့စာတန်းတွေမှာ link တွေအများကြီးချန်စရာမလိုတော့ပါဘူး.
နောက်ထပ်အစွမ်းထက်သောကိရိယာမှာငွေရှင်းကောင်တာဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်လောလောဆယ်တော့အမေရိကန်မှာသာရနိုင်ပါတယ်. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့အခါ, အရာတွေကထာဝရပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်.
ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့စွမ်းရည်ကိုကြည့်တယ်, Insta တွင် ၀ ယ်ရန်နှင့်ငွေရှင်းရန်ထိပါက Insta စျေး ၀ ယ်သူများသုံးသောပုံစံကိုပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်.
တကယ်တော့, စျေးဝယ်သူ 70% သည် ထုတ်ကုန်အသစ်များကို စစ်ဆေးရန် Instagram သို့ ပြန်သွားကြသည်။.
မကြာသေးမီလများအတွင်းများစွာပြောင်းလဲခဲ့သည်, မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအမြင့်မားဆုံးဖြစ်အောင်မင်းရဲ့ဒေသမှာလက်ရှိရနိုင်တဲ့ features တွေအားလုံးကိုသေချာသုံးသင့်တယ်.
IGTV စျေး ၀ ယ်သည်အလုံးအရင်းနှင့်သင့်ဖောက်သည်များအားဆွဲဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လာလိမ့်မည်.
ဗီဒီယိုပုံစံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, အသံထွက်ရန်နှင့်ယခုစာတန်းထိုးရန်, သင်၏အကြောင်းအရာသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုလက်လှမ်းမီသည်. မင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုပိုပြီးလက်လှမ်းမီလေလေ, မင်းပရိသတ်ပိုများလိမ့်မယ်. ဒါကသူ့ရဲ့ရောင်း ၀ ယ်မှုအားလုံးရဲ့ဂုဏ်အသရေပါ.
ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း, Instagram သည်စတိုးဆိုင်ကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုဖြန့်ကျက်ရန်အလွန်ရှည်လျားသည်, QR code နှင့်ယခု IGTV စျေးဝယ်ခြင်း.
သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကုမ္ပဏီတွေကိုကူညီဖို့ပါ, အမှတ်အသားများ, သြဇာရှိသူများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီသည်၎င်းတို့၏အမြင့်ဆုံးအလားအလာသို့ရောက်ရန်.
သင် IGTV စျေးဝယ်ခြင်းမှအကောင်းဆုံးရလိုလျှင်, ပထမ ဦး စွာသင်သည်သင်၏ပရိသတ်များအားဗီဒီယိုများဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကိုသေချာရန်လိုအပ်သည်.
ဗွီဒီယိုများသည်သင်၏ Insta တည်ရှိမှုကိုကြီးထွားစေရန်အစွမ်းထက်ပြီးလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်, မင်းရဲ့ပရိသတ်နဲ့ဘယ်လိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆက်သွယ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်.
ဗွီဒီယိုများသည်သင်၏စိတ်ထက်သန်မှုကိုပြသပြီးသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဇာတ်လမ်းကိုအလွယ်တကူဝေမျှရန်သုံးနိုင်သည်. မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြတင်းပေါက်တစ်ခုတင်မကဘူး, ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ပရိသတ်ကမင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာတွေအတွက်မင်းရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုခံစားနိုင်တယ်.
ယခင်ဆောင်းပါးTik Tok မြင်ကွင်းများကိုရယူနည်း – သတင်းအချက်အလက်လမ်းညွှန်တစ်ခု
နောက်ဆောင်းပါးInstagram checkout နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံး